Best Dental irrigators | Kedu nke a ga-azụta? Echiche, Ahịa na ntụnyere
Igwe mmiri mmiri eze
Ndị na-agba mmiri kacha mma
ọnụ b mmiri jet
Ndị na-agba mmiri nwere ike ibugharị
Waterpik WP 300 njem
Philips Sonicare diamond dị ọcha
Ịchọrọ inweta nsonaazụ kacha mma na ahụike eze? Chefuo maka ịhịa aka ma ọ bụ ịhịa aka n'ahụ wee malite iji mmiri mmiri eze. Ha dị irè, nchekwa, dị mfe iji ma nwee ike ịzọpụta gị ọtụtụ nleta na dọkịta eze.
N'ebe a, ị ga-ahụ ozi zuru oke na enweghị mmasị na ndị irrigators ọnụ: Ntụle, nyocha, echiche na ọnụ ahịa nke ụdị na ụdị kachasị mma ka ị nwee ike ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa na mmefu ego gị. Echefula nkọwa ma nweta ọnụ ọchị gị kacha mma!
Ntụle ndị ogbu mmiri ọnụ kacha mma
Tụlee atụmatụ kachasị mkpa nke kọmpụta kacha mma ma ọ bụ ngwaọrụ enweghị eriri na nlele na tebụl abụọ a.
Ntụle ndị na-agba mmiri na tebụl kacha mma
Ọnụ ala dị ala
Ọnụ ahịa adịghị
Ntụle ndị na-agba mmiri njem kacha mma
Nke 1 na Ahịa
WP-450 enweghị eriri
Batrị enwere ike ibugharị
Ntụnyere ndị na-agba mmiri eze eze
Ndị na-agba mmiri ọnụ kacha mma
Kedu ihe bụ ogbugba mmiri n'ọnụ?
Kedu onye ogbugbo eze ka ịzụrụ?
Gịnị bụ kacha mma eze irrigator?
N'oge e nwere ọtụtụ narị ụdị na ahịa, ma ndị a bụ 10 kacha mma onu irrigators (desktọpụ na laptọọpụ) na ọkacha mmasị nke ndị ọrụ Spanish:
Waterpik WP-100 - Ngwaahịa nke ...
Pụtara ìhè Atụmatụ:
Ọkwa nrụgide 10 ruo 100 Psi
Isi 7 gụnyere
Specific Mouthpieces Implant, Orthodontics, wdg ..
Ntụgharị ntụgharị ogo 360
Bọtịnụ dị na Aka
650 ml mmiri mmiri
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụdị ụlọ ọrụ kachasị elu, WP-100 bụ kacha ere eze irrigator na obodo anyị afọ.
Nke a hydropulsor bụ nke ụwa na-eduga ika na ịdị ọcha ọnụ karịa Ndị dọkịta ezé kwadoro, nwere akara nke ADA (American Dental Association) na arụmọrụ ya adịla nke sayensị gosipụtara.
Nkọwapụta gị dabara mkpa nke onye ọrụ ọ bụla, karịsịa ebe ọ na-agụnye nozzles maka mkpa niile.
Waterpik WP 100 nyocha
Ịhịa aka n'ahụ na chịngọm ọrụ
El WP-660 bụ ndụmọdụ anyị maka ndị na-achọ ogbugba mmiri nke àgwà na nnọọ zuru ezu na ihe gbanwee price. Ọ bụ na a ọkara price nso, ọ bụ site na-eduga ika na ya nkọwa na akụrụngwa bụ magburu onwe ya maka onye ọrụ ọ bụla.
Nke a hydropulsor nwere ọkwa ike dị iche iche, nozzles maka mkpa dị iche iche na teknụzụ kachasị mma nke ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ patent na ahịa.
Waterpik WP 660 nyocha
Ọkwa nrụgide 5 ruo 51 Psi
Isi 4 gụnyere
600 ml mmiri mmiri
Mgbidi ma ọ bụ okpokoro okpokoro
Ikpe 30 ụbọchị
Braun ewulitela aha ọma n'ụwa nke ịdị ọcha eze na ndị na-agba mmiri ha sokwa na ndị kacha mma n'ahịa.
El Oxyjet sitere na braun bụ onye na-ere ahịa kachasị mma nke pụtara maka inwe usoro nhicha nke ahụ na-ejikọta jet mmiri n'okpuru nrụgide na ikuku dị ọcha, nke na-eme ka otu a nhọrọ magburu onwe ya maka ndị nwere chịngọm mmetụta.
N'ozuzu, ọ bụ ngwaọrụ zuru oke na ndị ọrụ nwere afọ ojuju na nsonaazụ ọ na-enye. Okwesiri ikwu nke ahụ nrụgide kachasị dị ala karịa ọtụtụ ngwa, mana site na Oral B ha agwala anyị na ọ bụ ihe amamihe dị na ya dịka ọmụmụ ha siri dị.
Aquapik 100 - eze irrigator ...
Ọkwa nrụgide 10 ruo 130 Psi
Ịdọ aka ná ntị nke oge
Ọ bụrụ na ị nwere oke mmefu ego, ị gaghị ahapụ ezigbo onye na-agba mmiri ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ nhọrọ na ahịa nke ọnụ ahịa ha na-erute nke mmefu ego niile. Anyị chọrọ ka a mata ihe nlereanya na ha nwere ezigbo onye ọrụ kwuru ndị nwara ya na ihe ọ na-enye 5 afọ akwụkwọ ikike.
Aquapik sitere na akara Oralteck Usa bụ ADA kwadoro, nwere nkọwa dị oke mma, akụrụngwa zuru oke na a n'ezie gbanwee price ikwu na asọmpi.
Usoro mmiri Pro-HC
Oral ma ọ bụ eze ogbugba mmiri ...
Ọkwa nrụgide 5 ruo 75 Psi
Isi 11 gụnyere
1100 ml mmiri mmiri
Ihe ọzọ hydropropeller akụ na ụba nke pụtara n'elu ndị ọzọ bụ ngwaọrụ nke ika ahụ Pro-HC, kpọmkwem na PREMIUM SYSTEM WATER, nke anyị tụlekwara na webụsaịtị anyị.
Ọ bụ ngwaahịa na Ọ pụtara n'elu ihe niile na ọnụ ọgụgụ nke isi gụnyere yana na isi ya ma dị irè ma dị mfe ọrụ. Na mgbakwunye na ịkwalite ịdị ọcha ọnụ, ọ nwere isi abụọ maka imi imi.
Nyocha usoro mmiri mmiri
Waterpik WP-450 ikuku
Ọkwa nrụgide 2 ruo 75 Psi
210 ml mmiri mmiri
N'agbanyeghị ọnụ ahịa ya karịrị nkezi, wp-450 Ọ bụ otu n'ime ụgbọ mmiri hydropulsors kacha ere na mba anyị. Nkọwa ya zuru oke na ahụmahụ nke ika ahụ na-eme ka ọ bụrụ nzọ dị mma.
Na-apụta n'elu nkezi na mma mma nke ihe, ukwuu ikike nke tank, ọzọ nnwere onwe nke batrị na na ọ na-agụnye pụrụ iche nozzles maka implants na maka orthodontics.
Waterpik 450 nyocha
Nrụgide ruru 85 Psi na 1400 pulses kwa nkeji
Ụdịdị 3 (Ikuku na-emekarị, Ikuku na SOFT, JET)
Isi 2 gụnyere
130 ml mmiri mmiri
kasị mma Panasonic irrigators Ha bụ batrị ụdị na nke a cordless onu irrigator bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị nwere ọnụahịa kacha mma na ahịa. Nke a etinyela ya dị ka otu n'ime ndị kacha ere na obodo anyị, n'elu ọbụna waterpik.
Ọ bụ ngwaọrụ nwere ezigbo ike na ụdị ọrụ atọ maka nsonaazụ dị mma na ịdị ọcha ọnụ. Naanị ihe ọghọm ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ bụ ikike dị ala nke tank, nke na-achọ ka e mejupụta ya ugboro ugboro.
Hụ ndị ọzọ Panasonic eze irrigators
Waterpik WP-300 njem
EKPERE MMIRI - EKWU MMIRI WP300 ...
Ọkwa nrụgide 3 ruo 80 Psi
450 ml mmiri mmiri maka 60 sekọnd
Dị ka aha ya na-egosi, WP 300 bụ ihe nlereanya nke desktọpụ nwere atụmatụ na atụmatụ na-eme ka ọ dị mfe iburu ya ebe ọ bụla anyị na-eme njem.
Maka nke a ha nwere belata nha ya ma ha haziwo ya otú ahụ enwere ike ịchekwa ya na obere akpa njem gụnyere.
O nwekwara ndakọrịta na grid ike nke mba dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo mbugharị ọzọ na ụdị batrị.
Oral-B 2 n'ime 1
Oral-B PRO 3000 - ọdụ ...
Na usoro nke 2-na-1 ndị na-agba mmiri na-eji ogbugba mmiri na ahịhịa eze onye ndu na-enweghị mgbagha bụ nke a ika hydropulsor Oral-B. N'otu ngwa ahụ anyị nwere a na-eduga ika eletriki eze ahịhịa na hydropulsor iji mee ogbugba mmiri n'ọnụ mgbe ịchachara nke ọ bụla.
Anyị achọghịkwa ichefu ihe nlereanya 2-na-1 ọzọ nke anyị nyochara, nke Waterpik WP900. Ọ bụ ezie na ọ bụghị na-ewu ewu na ndị ọrụ, ọ na-arụpụtara site na ụlọ ọrụ na kasị mma eze irrigators na ahịa.
Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị eletriki eze ezé, ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka nweta ịdị ọcha eze zuru oke n'ụlọ.
Sowash: Igwe mmiri mmiri na-enweghị moto
Ị chọrọ ihe nkwalite na-abụghị moto nke na-adịghị eme mkpọtụ na-adịghị eri ike eletrik? Sowash nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 echiche yana nkezi akara nke 4.2 karịrị 5 site n'aka ndị ọrụ zụrụ ya.
Ọnụ ya dị ala karịa ụdị ndị ọzọ ejikọtara na mgbata na n'elu ya nke kacha ere ahịa na nke kacha mma.
Ugbu a enwere ọtụtụ narị ụdị ụdị dị iche iche dị iche iche nkọwa, aghụghọ na ọnụ ahịa. Nke a na-eme ka o sie ike ịhọrọ ezigbo ogbugba mmiri n'ọnụ maka nke ọ bụla.
Ihe kachasị mkpa na hydropulsor bụ na ọ dị irè na mkpochapụ nje bacteria na irighiri nri nwere ike ịdịgide na oghere ọnụ mgbe ịchachara.
Malite site na isi a, enwere nkọwa ndị ọzọ dị mkpa, dị ka ntọala nrụgide ma ọ bụ ikike nke tank, na ndị ọzọ na-adịghị mkpa dị ka nhazi ma ọ bụ ọkwa ụda.
Ntuziaka maka ịhọrọ ezigbo ogbugba mmiri ọnụ
Ndị a bụ isi njirimara iji tụlee ịhọrọ gị mmiri mmiri kacha mma:
Na mbụ, nke a na-ahụkarị bụ ịhọrọ ụdị desktọpụ na eletriki mgbapụta, ma e nwere ndị na-ahọrọ a Igwe mgbaba eze nwere ike ibugharị iji were ya na njem gị ma ọ bụ ọbụna otu na-enweghị engine.
Ụdị nrụgide na eze ịsa ahụ
Otu n'ime njirimara ndị na-enye anyị ezigbo ihicha bụ ike na àgwà nke ụgbọ mmiri mmiri. Ndụmọdụ anyị bụ ịhọrọ ụdị nwere ike kachasị elu mana enwere ike ịhazi ya mgbe niile, ka anyị nwee ike imezi ya ka ọ dị anyị mkpa. Ike dị elu mana enweghị usoro iwu nwere ike ịkpasu ụfọdụ ndị iwe.
E wezụga ike dị iche iche, kwa enwere ụgbọ elu mmiri dị iche iche na ngwa na ohere ịhọrọ ụdị ojiji dị iche iche. Enwere ụgbọ elu nwere iti ọzọ kwa nkeji, ụgbọ elu na-aga agwakọta ya na afụ ikuku na ọbụna squirt ụdị ịhịa aka n'ahụ.
Ike nkwụnye ego
N'ụdị ụfọdụ nha nke tank O zughị ezu iji mee nhicha zuru oke, yabụ ị ga-emejupụta ya n'oge ụfọdụ. Nke a na mbụ dị ka ọ dịghị mkpa ma ka oge na-aga nwere ike iwe iwe, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ dị obere ma ọ dị mkpa ka ị jupụta ọtụtụ ugboro kwa ojiji.
Na mgbakwunye na ọnụ ọnụ ọkọlọtọ maka ezé ezé ahụike, enwere ụfọdụ ọnụ ọnụ maka ndị ọrụ na-eji orthodontics ma ọ bụ ndị nwere eze eze. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ezigbo nsonaazụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị buru nke a n'uche mgbe ị na-ahọrọ onye na-agba mmiri kacha mma maka gị.
Ọ dịkwa mma ịkọ na e nwere ụdị nwere nozzles ofu na ya Mpekere ọnụ na-atụgharị ma na-enye ohere ịnweta mpaghara niile nke ọnụ n'ụzọ dị mfe.
Nnweta akụkụ mapụtara na / ma ọ bụ ngwa ngwa
Tupu ịhọrọ hydropulsor, ị kwesịrị ijide n'aka na ọbụlagodi nozzles nnọchi dị nke ị ga-achọ. Ndị a nozzles nwere ndụ bara uru nke ọnwa ole na ole na ọ dị mkpa iji dochie ha, dị ka ahịhịa eze.
Ịzụta ihe nlereanya sitere na ụdị ndị a ma ama na-ekwe nkwa na akụkụ ahụ ga-adị dị maka ogologo oge.
Ọkwa mkpọtụ na imewe
Ọ bụ ezie na ha bụ àgwà na adịghị emetụta arụmọrụ ozugbo N'ime onye na-agba mmiri n'ọnụ, e nwere ndị na-etinye ihe dị ukwuu n'akụkụ abụọ ahụ. Mkpọtụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ndị na-agba mmiri na-arụ ọrụ, ma ọ bụ eziokwu ụfọdụ ngwa na-enwe obi ụtọ karịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ịgbachi nkịtị n'oge ogbugba mmiri n'ọnụ, ị ga-ahọrọ otu n'ime ụdị na-enweghị moto nke etinyere na mgbata.
Ụdị ụdị dị iche iche dị mma, na-enwe ike ịhọrọ agba dị iche iche yana nha dị iche iche. E nwere ọbụna ụfọdụ kọmpat benchtop thrusters e mere maka njem, dị ka waterpik wp-300 njem. Enwere ike ịgbanye ụfọdụ ngwa na mgbidi, ihe nwere ike ekele na obere oghere.
Ọnụ ahịa ndị na-agba mmiri eze na akwụkwọ ikike
Ịdị irè nke ndị na-agba mmiri na afọ ojuju n'ozuzu nke ndị ọrụ pụtara na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ abawanyela. Ka ọchịchọ na-arị elu, ọtụtụ ndị nrụpụta ọhụrụ apụtala ndị malitere n'ahịa mbipụta nke kacha mma ụdị. Brandsdị ndị a ha enweghị ahụmahụ ma ọ bụ nkwa arụmọrụ dị ka Waterpik, nke ADA kwadoro ma na-emepe emepe ma na-akwado teknụzụ ya ihe karịrị afọ 30.
O doro anya na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ị nweta ụdị kachasị mma na ahịa, ma hay Ndị na-agba mmiri eze dị ọnụ ala na-enye ezigbo nsonaazụ. Na webụsaịtị anyị ị nwere ike ịhụ ihe karịrị otu nwere ezigbo mma yana ezigbo echiche onye ọrụ.
Echiche ndị ọrụ
Echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ onye nwara onye na-agba mmiri ọnụ bụ ezigbo ntụaka iji mara nsonaazụ ọ na-enye. Onye ọ bụla dị iche, mana hydropulsor nke nwere ọtụtụ ọkwa ma nweta akara dị elu agaghị emechu anyị ihu.
Hụ ndị kacha mma Oral irrigators
Ụdị kacha mma nke ndị na-agba mmiri
Otu nzọụkwụ karịa ihe niile bụ Waterpik, onye ndu uwa na eze irrigators na Ọtụtụ patent na ọmụmụ sayensị na-akwado ngwaahịa ha. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa kacha mma, ọ bụghị naanị ya nwere ezigbo nkwalite.
Pịa na ha ka ị nweta ozi niile gbasara ụdị ndị a ma ama na ụdị ha kacha mma:
[su_row] [su_column size = "1/2 ″ etiti =" enweghị "klas =""]
Gịnị bụ a eze irrigator?
Igwe mmiri mmiri ọnụ ma ọ bụ ịsa eze bụ naanị ngwaọrụ na-eji a pulsating jet nke nrụgide mmiri iji wepụ ihe irighiri nri na ihe ndozi nje que ha na-eguzogide ịsa ahịhịa kwa ụbọchị.
A maara usoro a dị ka ogbugba mmiri n'ọnụ ma nweta rute ebe siri ike nke oghere ọnụ, dị ka mpaghara interdental, eriri chịngọm ma ọ bụ akpa oge.
Otu esi eji mmiri mmiri eze
All irrigators nwere nnọọ yiri usoro ma na-isi ihe mejupụtara a tank mmiri, mgbapụta na nozzle ebe ị ga-etinye ụgbọ elu nrụgide.
Ụfọdụ ụdị na-etinye nkwalite dịka nozzles dị iche iche, ọkwa nrụgide mgbanwe dị iche iche, na ọbụna ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụ nha nha nha. N'ime ụdị nozzles dị iche iche anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ maka orthodontics, n'ihi na ịkụbanye na ọbụna asụsụ.
Ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara onye na-agba mmiri n'ọnụ
Obi abụọ a na-enwekarị banyere hydropulsors
Kedu mgbe ọ dị mkpa iji hydropulsor?
Ha dị mma maka onye ọ bụla ndị na-achọ inweta nlekọta ahụike ka mma n'ụlọ nke ha, si otú a na-enyere aka igbochi ọrịa ọnụ. Ị adịghị mkpa inwe nsogbu ọ bụla iji ha, na e nwere ọbụna ụdị maka ụmụaka, ma ekwesịrị iji ya mee ihe mgbe niile n'ọnọdụ ndị a:
Ndị ọrịa nwere ihe nkwado na-eme ka ihicha sie ike
Ndị ọrịa etinyere eze
Ndị na-arịa ọrịa gingivitis ma ọ bụ periodontitis
Ugboro ole n'ụbọchị ka a na-eji ogbugba mmiri n'ọnụ?
Enwere ike iji ya mgbe ọ bụla eze na-asachapụ, ọ bụrụhaala na ọ na-erughị nkeji ise kwa awa abụọ
Mmiri mgbata na-arụ ọrụ?
Ndị na-agba mmiri na-arụ ọrụ na nkịtị mgbata mmiri, ọ dịghị mkpa iji mmiri ịnweta mmiri ma ọ bụ jiri ihe mgbakwunye ọ bụla.
Ọtụtụ mmadụ nwere ike iji ya?
na nozzles na-agbanwe agbanwe ma na-abịakarị na agba dị iche iche, ya mere ndị òtù ezinụlọ dị iche iche nwere ike iji otu hydro-propellant mee ihe.
Enwere ike iji ya na ịsacha ọnụ?
Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa, enwere ike ịgbakwunye ọnụ n'oke oke nke 1: 1. A naghị atụ aro iji ihe mgbakwunye ndị ọzọ dị ka bicarbonate ma ọ bụ chlorine.
Ụdị ndị na-agba mmiri n'ọnụ
Anyị nwere ike ịzụta ugbu a ụdị atọ nke ngwaọrụ maka ogbugba mmiri n'ọnụ:
Tabletop irrigator: Ịkwesịrị itinye ha na netwọk eletriki na ha bụ ndị a na-ahụkarị. Dịka iwu n'ozuzu, ha bụ ndị na-enye arụmọrụ ka mma, ọtụtụ ụdị ojiji na ọnụ ọgụgụ nke nozzles. Ha nwere ike ịbụ ụdị dị mfe ma ọ bụ abụọ-na-otu irrigators, nke gụnyekwara ihe igwe nchara nchara.
Ndị na-agba mmiri nwere ike ibugharị: Ha bụ wireless ụdị na tinye batrị enwere ike ịchaji. Ngwaọrụ ndị a bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ya n'ụlọ ma ọ bụ na ị nwere obere ohere n'ime ime ụlọ ịwụ gị.
Igwe mmiri mmiri mmiri na-enweghị moto: Ụdị ngwa a ha bụ ndị kasị nta ere, ma ha nwere ụfọdụ uru. Zuru oke na jikọọ ha ozugbo na mgbata na ebe ọ bụ na ha enweghị moto, ha adịghị mkpa ike na ha anaghị eme mkpọtụ.
Ebe ị ga-azụta ogbugba mmiri n'ọnụ?
Ma ị na-ahọrọ ihe nlereanya a ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Ndụmọdụ anyị bụ ịzụta ya n'ịntanetị na Amazon. Ha nwere Ọtụtụ ụdị, ọnụ ahịa ịntanetị kachasị mma, mbupu dị ọnụ ala na ngwa ngwa na ị nwekwara ike weghachite ịzụrụ ihe n'enweghị nsogbu. Anyị na ha na-arụkọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ma anyị enwebeghị nsogbu.
Ndị na-agba mmiri ọnụ kacha ere
Anyị agwala gị ụdị kachasị mma na ahịa, mana ngwaahịa ndị a anaghị adaba mgbe niile na ndị na-ere ahịa kacha mma. N'okpuru ị nwere ike ịhụ a ndepụta nke a na-emelite na-akpaghị aka site na ndị na-agba mmiri eze kacha ere nke oge a:
Oral ogbu mmiri nke nwere ike ibugharị... Hụ atụmatụ 11.310 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Oral-B Oxyjet Dental irrigator... Hụ atụmatụ 20.892 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Oral ogbu mmiri nke nwere ike ibugharị... Hụ atụmatụ 5.454 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Apiker Dental irrigator ... Hụ atụmatụ 10.918 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Ọkachamara Dental irrigator... Hụ atụmatụ 3.941 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Ndị na-agba mmiri ọnụ-TURE ọma... Hụ atụmatụ 8.364 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Nke kacha mma	Oral ogbu mmiri nke nwere ike ibugharị...
Ọnụahịa mma	Oral-B Oxyjet Dental irrigator...
Ihe kachasị amasị anyị	Oral ogbu mmiri nke nwere ike ibugharị...
Ọkachamara Dental irrigator...
Ndị na-agba mmiri ọnụ-TURE ọma...
4 kwuru na «»
05/08/2019 na 00:50
Ebee ka m nwere ike ịzụta plọg magnetik maka waterpik irrigator m ????
Ahụ ike ọnụ
07/08/2019 na 09:03
Ndewo Maria. Ị naghị ekwu ihe nlereanya ị ga-enyere gị aka. Agbanyeghị, na webụsaịtị ị nwere ike nweta data nke ọrụ nka nke ika maka Spain.
17/12/2019 na 11:14
Akụkọ zuru oke !! Ha na-akpọkwa onye na-agba mmiri eze nke ndị na-ejikọta na mgbata 🙂 (Ahụrụ m ha n'anya). Ejila m ya saa na eziokwu bụ àgwà bụ ... mgbe niile ebe ọ bụ na mmiri na-apụta site na njikọ na mgbata na ihe ndị ọzọ. Maka ndị nke na-amasị ndị na-agba mmiri mgbata mgbata, enwere ụdị ndị ọzọ dị mma karịa So Wash, dị ka Kler ..., Ban ...
Iji kporie ndụ ndị na-agba mmiri ma echefula ịgakwuru dọkịta eze site n'oge ruo n'oge na otu ihe anaghị ewepụ nke ọzọ 🙂
17/12/2019 na 14:32
Daalụ nke ukwuu Ana, anyị na-agba mbọ imepụta ọdịnaya nwere ebumnobi na ịdị mma. Ekele
Ndị irrigators Black Friday
eze irrigator 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki